လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေဘာကြောင့် အရှည်မထားသင့်တာလဲ.. ? by popolay.com
21 Apr 2020 9,212 Views
ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာကြောင့် လက်သည်းတိုတို ညှပ်သင့်သလဲဆိုတာကို …စဉ်းစားဖူးပါသလား…။ တကယ်တော့ လက်သည်းအရှည်ထားတာကလည်း တစ်မျိုးလှပြီး၊ လက်သည်းဆေးဆိုးတာ၊ ပုံဖော်တာတွေက ပိုပြီးတောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်သည်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ညှပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ လက်သည်းအတို ဘာကြောင့် ညှပ်sသင့်သလဲ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိလဲ၊ ဘယ်လိုဂရုစိုက် စောင့်ရှောက်ရမလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်သည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ရဲ့ အရေးမကြီးတဲ့ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုလို့ထင်ရပြီး ဘာကြောင့်ရှိရတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားမရဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် လက်သည်းသည် ခြေချောင်းလက်ချောင်းများရဲ့ အပေါ်ယံအရေပြားကို ကာကွယ်ပေးတယ်၊ ကြည့်ကောင်းစေတယ်၊ ကုတ်တာ ဖဲ့တာ ခြစ်တာတွေကို အထောက်အကူပြုတယ်။ ယခုခေတ်မှာဆို လက်သည်းနဲ့ဆိုင်သော အလှအပ ပစ္စည်းများ၊ လက်သည်းအလှပြုပြင်ဆိုင်များ အများအပြားထွက်ရှိလာနေပြီး ခေတ်စားလာတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း လက်သည်းများ အရောင်အသွေးစုံလင်လှပပြီး ရှည်လျားကျော့ရှင်းနေတိုင်းလည်း အမြဲတမ်းကောင်းတယ်လို့ မဟုတ်ရပါဘူး။
လက်သည်းကို မကြာခဏ အမြဲညှပ်ပေးသင့်ပြီး၊ သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် သေချာဂရုစိုက်ပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့……။
1. ဘက်တီးရီးယားပိုးများ စုဆောင်းရာနေရာဖြစ်ခြင်း
လက်သည်းအရှည်ထားခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ စုဆောင်းစေပြီး၊ ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘက်တီးရီးယားများသည် ညစ်ပတ်သောပတ်ဝန်းကျင်၌ ကောင်းမွန်စွာကြီးထွားနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့် မသန့်ရှင်းတဲ့လက်သည်း နှင့် လက်သည်းအရှည်ထားခြင်းတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်ကို ပိုမိုတိုးပွားစေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မှာ ခြေသည်းပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့တွေဟာ ရှူးဖိနပ်တွေ တစ်ချိန်လုံးစီးတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုကြာကြာစီးခြင်းအားဖြင့် ခြေထောက် လေဝင်လေထွက် မရှိသလောက်ဖြစ်ကာ ခြေစေးတွေအရမ်းထွက်ပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ပိုမို များပြားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်သည်းတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ စုဆောင်းရာနေရာဖြစ်ရုံသာမက မှိုပိုးများ စုဆောင်းရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချွေးမကြာခဏထွက်တဲ့ အားကစားသမားများဟာ သန့်ရှင်းမှုအားနည်းရင် လက်သည်းမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးရော မှိုပိုးပါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိပိုရှိပါတယ်။
လက်ကို မကြာခဏဆေးကြောပါလို့ ထပ်ကာထပ်ကာတိုက်တွန်းတာတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ထမင်းမစားခင်အချိန်လက်ဆေးရန် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသန့်ရှင်းတဲ့လက်ကနေတစ်ဆင့် အစားအစာတွေစားမိရင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတာ၊ အစာအဆိပ်သင့်တာကို ဖြစ်နိုင်တယ်။
ထိခိုက်နာကျင်မှု၊ သွေးထွက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်မှုတိုင်းဟာ အမြဲတမ်း အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ရတာချည်းပဲမဟုတ်ပဲ၊ အခန့်မသင့်ရင် မိမိကိုယ်မိမိကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လက်သည်းအရှည်ထားတဲ့ မည်သူမဆို ထိုတမင်လုပ်ရပ်မျိုးမဟုတ်တဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ဖူးကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဥပမာ - လက်သည်းအရှည်နဲ့ လက်တွေခြေတွေမှာ ကုတ်ခြစ်မိတာ၊ မျက်လုံးကို စိုက်မိတာ၊ ဦးရေပြားခြစ်မိတာ စသဖြင့်တွေ…။
5. လက်စွယ်၊ ခြေစွယ်ငုပ်နိုင်ခြင်း
လက်သည်း၊ ခြေသည်းများအရှည်ထားခြင်းဟာ ခြေစွယ်၊ လက်စွယ် ငုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေသည်းတွေမှာက ပိုပြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ ရှည်ထွက်လာတဲ့ခြေသည်းတွေဟာ အရေပြားထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပြီး နီမြန်းရောင်ရမ်းတာ နာကျင်တာတွေကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
1. ဘက်တီးရီးယားနှင့်မှိုပိုးများ မစုဆောင်းနိုင်ရန် အမြဲတမ်း လက်သည်း၊ခြေသည်းများကိုညှပ်ပေးပါ။
2. လက်ဆေးတဲ့အခါတိုင်းမှာ လက်သည်းပါ သေချာဆေးပါ။ လက်သည်းကြား၊လက်သည်းအောက်များကို စင်ကြယ်အောင် သေချာပွတ်တိုက်ဆေးကြောပါ။
3. လက်သည်းအလှပြုပြင်ပစ္စည်းများ အသုံးမပြုခင် အရင်ဦးဆုံး သန့်ရှင်းရေးသေချာပြုလုပ်ပါ။
4. လက်သည်းကို ကိုက်ခြင်း စုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
5. ရှခြင်း အက်ကွဲခြင်းမဖြစ်ရန် လက်သည်းညှပ်ပြီးအချိန်တိုင်းမှာ လက်သည်းတိုက်တံအသုံးပြုပါ။
6. လက်သည်းညှပ်တဲ့အခါ လက်ချောင်းနားတစ်ဝိုက်က အရေပြား(အသား)တွေ မပါမိအောင် သတိထားပါ (ဘက်တီးရီးယားတွေ မှိုပိုးတွေ ဝင်နိုင်သောကြောင့်)
လက်သည်းညှပ်တာ ဘာမှမရှုပ်ထွေးဘဲ လွယ်ကူပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်ကန်ရန် လွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်။ နည်းလမ်းမှန်ကန်သည့်အတွက် သန့်ရှင်းမှုလည်းဖြစ်ပြီး၊ ထိခိုက်နာကျင်မှုများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။
1. လက်သည်းမညှပ်ခင် လက်သည်းညှပ် နှင့် လက်သည်းတိုက်တံကို အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းရေး အရင်ပြုလုပ်ပါ။
2. ရေချိုးပြီး (သို့) လက်ဆေးအပြီး လက်သည်းအသားပျော့တဲ့အချိန်မှာ ညှပ်ပါ။
3. လက်သည်းကို တစ်ဘက်ခြမ်းကနေ နောက်ထပ်တစ်ဘက်ခြမ်းစီသို့ ဒေါင်လိုက်ညှပ်ပေးပါ။
4. သွေးထွက်တာ ပိုးဝင်တာတွေမဖြစ်ရအောင် လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ နီးနားတဝိုက်က အသားတွေမညှပ်မိအောင် သေချာဂရုစိုက်ညှပ်ပါ။
5. လက်သည်းတိုက်တံအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လက်ချောင်းတွေ တစ်ချောင်းပြီးမှ တစ်ချောင်း သေချာပြုလုပ်ပါ။
7. လက်နဲ့လက်သည်းများကို Moisturizer (သို့) Hand cream နဲ့ထိန်းသိမ်းပါ။